Afar kamid ah ciidamada Kenya oo ku dhaawacmay weerar ka dhacay magaalada Gaarisa. – Radio Daljir
Afar kamid ah ciidamada Kenya oo ku dhaawacmay weerar ka dhacay magaalada Gaarisa.
Gaarisa,Dec 16-Weerar bamgacmeed ah oo kadhacay magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen afar ka mid ah ciidamada amaanka ee dalka Kenya oo ilaalo ka hayayay xabsi ku yaala Gaarisa.
Taliyaha ciidamada booliska gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya James Seriani oo la hadlayay wakaaladda wararka AP ayaa sheegay bamgacmeedkan in habeenimadii xalay lala beegsaday xabsi ku yaala magaalada Gaarisa,kaasi oo sababay dhaawaca afar askari .
James Seriani ayaa dhinaca kale xusay in weerar labaad oo loo adeegsaday bam gacmeed in lagu weeraray hotel ku yaala magaalada Gaarisa,mana uusan sheegin hadii weerarkaasi uu gaystay waxyeelo iyo inkale.
Weerarada qaraxyada ah ee loo adeegsado bamgacmeedka ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay kusoo badanayay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya,xilli ay dowladda Kenya ciidamo u dirtay dalka Soomaliya mudo bil kusiman.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay wado qorshe ay ku jabinayso kooxda xiriirka la leh ururka Al-Qaacidda ee Al-Shabaab,oo ay ku eedeeysay inay ka dambeeyaan weeraro afduub iyo kuwa qaraxyo ah oo ka dhacay dalka Kenya.